3d Printer Filament (Fluorescent yero)
3d Printer Filament (Purple dzvuku)
Cixi lanbo kudhinda rinopiwa Co., Ltd.was hwakagadzwa muna 2011and riri muna CIXI, Ningbo, ZHEJIANG,
kunakidzwa yakakunakira zvokufambisa kuwana uye wakanaka ezvinhu.
Boka redu ndokwenguva nzvimbo 2000square metres uye ane vashandi 100.
Ko 3D akadhindwa mweya? Kukutora...
Vakawanda kuteerera 3D kudhindwa, pakutanga kwezvose, nokukwezvwa yakaisvonaka zvinhu zviduku radhindwa 3D. Uyezve, dzimwe shamwari achatarisira pamusoro mabasa akasiyana yemashoko 3D vaidhinda, uye 3D zvaidhindwa vave yaregeredzwa kakawanda. Kutaura zvazviri, 3D zvaidhindwa zvinogona ...
Ziva pla yokunyorera 3D akadhindwa mai ...
Vatengi vakawanda neshamwari vanondibvunza kana pla mapurasitiki? Herino ine hurukuro pane pla nhasi. Pla ndiye Chirungu chidimbu kubva polylactic acid, zvakanyorwa se: polylacticacid. Polylactic asidhi (pla) iri yokufungidzira biobased uye biodegradable zvinhu yaigadzirwa starch mbishi zvinhu dzichitaurwa ...
Pane yakachengeteka iri 3D yakadhindwa ele ...
3D zvokudhinda zvemichina kunobva digital womuenzaniso, achishandisa bondable zvinhu zvakadai weupfu simbi kana mupurasitiki kudhinda nemamiriro chinhu rukoko kubudikidza rukoko. Michina iyi ine kushanda muminda zvishongo shangu, maindasitiri design, kuvaka, engineering kuvakwa, ...